Igama: I-Carbomer Carbopol Inkcazo yeCarbomer 276 yipolyacylate Polymer enqamlezileyo enesakhono sokunyibilikisa, esebenza njenge-thickener ephezulu kakhulu esebenzayo kunye nesezantsi, isisinisi kunye nearhente yokumisa. Inokonyusa ixabiso lesivuno kunye nerheology yezinto ezingamanzi, yiyo loo nto kulula ukufumana izithako ezingenakunyibilika (igranual, i-drop yeoyile) enqunyanyisiweyo kumyinge ophantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ze-HI & I kunye nezo fomathi apho uzinzo lwe-oxidative kunye nokusebenza kweendleko zezona mfuno ziphambili. Ca ...
Igama: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbopol UIltrez 21: acrylate / C10-30 alkyl acrylate cross cross copolymer, for short denaturation, for gel, washing cleaning products, high electrolyte products, cream, emulsion. Inkcazo I-Carbomer 21 I-Carbopol 21 yipolyacrylate eplastikhiweyo eguqulweyo. Isebenza njenge-thickener ephezulu-esebenzayo kunye ne-low-thickener kunye ne-arhente yokumisa njengenye i-resin ye-carbomer yemveli, ikwabonelela ngokunyamezelana kwe-electrolyte kunye nesenzi esikhethekileyo ...
Igama: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer 20 yi-hydrophobically eguqulweyo enqamlezayo ye-acrylate copolymer, ebonelela nge-viscosity ephakathi ukuya kwiipropathi zokuhamba kakuhle. Ihambisa ukusebenza ngokugqwesileyo kokuqina kuluhlu olubanzi lwe-pH eyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kwizicelo ezibanzi. I-NM-Carbomer ezingama-20 ezifudumeleyo kunye nokusasazeka ngokukhawuleza kwimizuzu, edibana ngokuphawuleka neemfuno zokusetyenziswa kwabaqulunqi. Inokunyamezelana okuphezulu kwe-electrolyte kwaye iphathe inqanaba eliphezulu loku ...
Igama: ICarbomer Carbopol Carbomer 940 Carbopol940 yipolyacrylate Polymer enxibelelene nomnqamlezo esetyenziswa kwiijel zokukhathalela ubuqu kunye nezithambiso njengesixhobo sokuguqula i-rheology esisebenzayo. Iyakwazi ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngedosi ephantsi. Ukuhamba kwayo okufutshane (ukungasebenzisi-drip) iipropathi kufanelekile kwizicelo ezinje ngeegel ezicacileyo, iigels ezinotywala, iikhrimu. Xa ingathathi hlangothi ngealkali yenza amanzi aqaqambileyo okanye iigels ezinotywala kunye neekhrim. Iimpawu kwaye ube ...
Igama: I-Acrylates i-Copolymer Carbomer SF-1 sisilungisi se-rheology esibonelela ngokulula kolwelo ngelixa sihambisa izibonelelo ezizodwa kwiimveliso zokucoca ezisekwe kumhlaba. I-Carbomer SF-1 inika ngokuthe ngqo ukumiswa kunye nokuzinziswa, kunye neepropathi zokuqina, izinto ezenziweyo ezinomgangatho ophakamileyo wabasebenza ngokusebenza. Oku akusoloko kunokwenzeka ngemveliso eqhelekileyo yecarbomerproducts.Carbomer SF-1is alsowith inzuzo yokuvelisa iifomula ezicace gca ezinamanqanaba aphezulu o ...
I-Polyethylene glycol 20000 - iipropathi Le mveliso yinto emhlophe emhlophe. Unyibilika emanzini, unyibilike kwezinye izinyibilikisi eziphilayo. Isisombululo sayo sinesosi ephezulu kwiqondo eliphantsi, kwaye ingaqhubekeka ngokulahla, ukukhupha nokuphosa. Yintlaka ye-thermoplastic enokuhambelana okuhle nezinye iivenkile. Iyaxhathisa kukhukuliseko lwebacteria kwaye ine-hygroscopicity ebuthathaka emoyeni. I-Polyethylene glycol 20000-esemgangathweni Le mveliso ingumxube we-ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 10000 - iipropati Le mveliso izinto emhlophe granular. Unyibilika emanzini, unyibilike kwezinye izinyibilikisi eziphilayo. Isisombululo sayo sinesosi ephezulu kwiqondo eliphantsi, kwaye ingaqhubekeka ngokulahla, ukukhupha nokuphosa. Yintlaka ye-thermoplastic enokuhambelana okuhle nezinye iivenkile. Iyaxhathisa kukhukuliseko lwebacteria kwaye ine-hygroscopicity ebuthathaka emoyeni. I-Polyethylene glycol 10000-esemgangathweni Le mveliso ingumxube we-ethylene oxide an ...
I-Polyethylene glycol 6000 ilungiswe yipolymerization ye-ethylene glycol kulwelo kubushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu okanye uxinzelelo oluphantsi. I-Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Igama lesiNgesi: macrogol 6000-992 le mveliso ngumxube we-ethylene oxide kunye ne-polycondensation yamanzi, ifomula yeemolekyuli yi-CH (CH2CH2O) NH, apho n imele inani le-oxyvinyls. Uhlobo lomkhiqizo luyi-flake emhlophe okanye i-powder granular, i-smelly. Imveliso inyibilika emanzini okanye kwi-ethan ...
I-Polyethylene glycol 3350-isebenzisa i-Poly (ethylene oxide) resin ngumlinganiso ophakamileyo we-molecular homopolymer eyenziwe kukuvulwa kwendandatho ye-ethylene oxide yi-catalysis engafaniyo. Eyokuqala ibizwa ngokuba yi-polyethylene glycol kwaye eyokugqibela yi-polyoxyethylene. I-Polyethylene oxide (PEO) ineempawu zokuthambisa, ukuqina, ukukhutshwa kancinci, ukuthambisa, ukusasaza, ukugcinwa kunye nokugcinwa kwamanzi. Ilungele amayeza, isichumisi semichiza, ukwenza iphepha, iiseramikhi, iisepha, cos ...
I-Peg400 i-Polyethylene Glycol 400
I-Polyethylene glycol ineepropathi ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kubunzima bayo beemolekyuli, ukusuka kulwelo olungenambala kunye nolungenamuncu we-viscous ukuya kwi-wax eqinileyo. Xa ubunzima beemolekyuli bungu-200-600, lulwelo kubushushu begumbi. Xa ubunzima bemolekyuli bungaphezulu kwama-600, ngokuthe ngcembe buyaqina. Ngumahluko wobunzima bemilinganiselo yeemolekyuli, iipropathi zahlukile. Ukusuka kulwelo olungenambala kunye nolungenamuncu we-viscous ukuya kwi-wax eqinileyo. Ngokunyuka kobunzima beemolekyuli, i-hygroscopicity dec ...
I-Polyethylene glycol kunye ne-polyethylene glycol ene-acid ester isetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso nakumashishini amayeza. Ngenxa yeepropathi ezilungileyo ze-polyethylene glycol, ukunyibilika kwamanzi, okungagungqiyo, inertia yomzimba, ukuthamba, ukuthambisa kunye nokumanzisa, ulusu oluthambileyo, ukusetyenziswa kwemvakalo emnandi, njl njl. I-polyethylene glycol enamanqanaba ahlukeneyo okuma kobunzima beemolekyuli. Polyethylene glycol (Mr <2000) kunye relati ...
I-Peg-200: Ingasetyenziselwa njengendawo yokuhlanganisa izinto eziphilayo kunye nomphathi wobushushu oneemfuno eziphezulu. Ingasetyenziswa njenge-humectant, isinyibilikisi esongeza ityuwa engaqhelekanga kunye nolawulo lwe-viscosity kumzi mveliso weekhemikhali wemihla ngemihla. Isetyenziswa njengethambisi kunye nearhente ye-antistatic kwishishini lempahla eyolukiweyo; Isetyenziswa njenge-arhente yokumanzisa imveliso kwishishini lephepha kunye nakwimboni yezitshabalalisi. Ukuthambisa okugqwesileyo, ukufuma, ukusasazeka, izinto zokubambelela, iiarhente ze-antistatic kunye nezithambisi; Isicelo: Iikhemikhali zemihla ngemihla: izinto zokubamba intlama yamazinyo, umntu ...
<< <Ngaphambili 1234